Miisa roa ireo kandidà mibosesika hanatanteraka faradoboka etsy amin’ ny “coliseum” Antsonjombe amin’ity faran’ ny herinandro ity. Ny sabotsy ny an’ny kandidà laharana 13, ary ny alahady kosa ny an’ny kandidà laharana faha-12, izay marihina …Tohiny
Lalana Tsarasaotra-Ivato : Efa azo hifamezivezena
Nisokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly ny lalana mampitohy an’i Tsarasaotra amin’ny kaomina Ivato. Manomboka izao, afaka handehanan’ny rehetra amin’izay ity lalana ity, izay mirefy 11 km. Lalana natao hanamaivanana ny fitohanana misy amin’ny lalana Ambohimanarina, …Tohiny
Teny 67 Ha, Anosy, Antsobolo Ambatomaro ary Manjaka Ilafy, no nisehoana lozam-piarakodia ny zoma lasa teo. Nitohana ny fiara. Tsy mahagaga raha misy fitohanana lavereny ny fiara raha ny eto an-drenivohitra, satria efa dila hifarana …Tohiny
Manoloana ny vava nataon’ny mpitsara sady kandidà amin’ny fifidianana ho Filoham-pirenena, Fanirisoa Ernaivo, amin’ny fihantsiana ny mpitandro filaminana, dia namoaka fanapahana ny minisitry ny Fitsarana, Harimisa Noro Vololona, amin’ny fampiatoana ity mpitsara amin’ny asany amin’ny …Tohiny
Tonga nanotrona ny andro lehibe fankalazana ny fanombohan’ny taom-piasana 2018 sy fitrotroana am-bavaka ny filohan’ny FJKM (Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara), ary fotoam-bavaka amin’ny faha-50 taonan’ny FJKM ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo mpikambana eo ...Tohiny